आज ठूलो उल्कापिण्ड चन्द्रमाभन्दा पृथ्वीको दश गुणा बढी नजिक आउने
एक उल्कापिण्ड चन्द्रमाभन्दा पृथ्वीको निकै नजिक आउने बताइएको छ । डेली मेलका अनुसार आज १० मिटर लामो उल्कापिण्ड पृथ्वी र चन्द्रमाको बिचबाट करिब १० गुणा नजिक बाट गुज्रनेछ । यस्तो किसिमको अर्को नजिकको भेट केही दिन भित्रै हुनेछ जहाँ ६१ मिटर लामो उल्कापिण्ड पृथ्वी नजिकबाट गुज्रनेछ । भर्चुअल टेलिस्कोप प्रोजेक्टका अनुसार द्दण्ज्ञट च्द्यज..
आइफोन सेभेन र सेभेन प्लस आज लञ्च हुँदै, थाहा पाउनुस् यसका विशेषता
संसारको सबैभन्दा ठूलो टेक कम्पनी एप्पलले आफ्नो नयाँ संस्करण आइफोन सेभेनको सप्टे..
यो हो संसारको सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन, यस्ता छन् विशेषता
इजराइलको एक कम्पनी सिरिन ल्याब्सले संसारको सबैभन्दा महंगो स्मार्टफोन ‘सोलरिन’ लञ..
मूल्य कम तर विशेषतामा आइफोनभन्दा चार कदम अगाडि छ यो फोन !
बजारमा निकै तीब्र रुपमा आफ्नो पकड बनाउन सफल वन प्लसथ्री यस्तो मोबाइल हो जसमा तमा..
म्यानमारको भन्दा कम तिव्रता भएको इटालीको भूकम्पमा किन बढी क्षति ?
italyलस एन्जलिस – बुधबार एकै दिन इटाली र म्यानमारमा शक्तिशाली भूकम्प गयो । इटाली..
फेसबुकको मेसेन्जरलाई टक्कर दिन गुगलको ‘डुओ’
काठमाडौं – गुगलले नयाँ भिडियो च्याट एप्लिकेसन ‘डुओ’ सार्वजनिक गरेको छ । एप्पलको फेसटाइम, माइक्रोसफ्टको स्काइप र फेसबुकको मेसेन्जरलाई टक्कर दिनका लागि यो एप लञ्च गरिएको बताइएको छ । अरु भिडियो च्याट एपभन्दा खासै फरक नरहे पनि यसमा कसले कल गरिरहेको भन्ने दृश्य देखिने हुँदा प्रयोगकर्तालाई भिडियो कल लिने वा नलिने निर्णय लिन सजिलो हुने..
इन्टरनेटको गोप्य संसार ‘डार्कवेब ‘
हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने अनगिन्ती वेबसाइट छन् । तीन हुन्– गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब आदि । सामान्यतः हामी सबैले प्रयोग गर्न सक्छौँ । तर, इन्टरनेट दुनियाँमा एउटा यस्तो आपराधिक संसार छ, जुन हाम्रो पहँुचबाहिर छ । जसलाई डिपवेब मार्केट वा डार्क नेट भनिन्छ । डिपवेब मार्केट इन्टरनेटभित्रको एउटा गोप्य संसार हो, जसलाई साइबर सं..
फेसबुकमा अपमानजनक पोष्ट गर्नेलाई १ करोड ६० लाख जरिवाना !
अष्ट्रेलियामा एक व्यक्तिले फेसबुकमा अपमानजनक सामग्री पोष्ट गरेका कारण अदालतले १,५०,००० डलर (१ करोड ६० लाख रुपैयाँ) को जरिवाना तोकेको छ । उक्त फेसबुकमा पोष्ट गरिएको आक्षेपले एक होटल मालिकको जिन्दगी बर्बाद भएको थियो । मार्च २०१४ मा इलेक्ट्रिशियन डेभिड स्कटले फेसबुकमार्फत ‘ब्लू डल्फिन मोटेल’ का मालिक रोथलाई पेडोफाइल (बच्चामाथि यौन ..
फेसबुक अब मानिसहरुलाई एक आपसमा जोड्ने माध्यम बनिसकेको छ । युवापुस्ता मात्र नभई आजकाल फेसबुकको प्रयोग बालकदेखि वृद्धसम्मले गर्न थालिसकेका छन् । फेसबुकमा हामी धेरैलाई साथी बनाउँछौं । फेसबुकले कतिलाई जोडेको छ भने कतिलाई तोडेको पनि छ । फेसबुकमा बनेका सबै साथीहरु राम्रा नै हुन्छन् भन्ने छैन । तीमध्ये कोहीले तपाईंलाई मानसिक तनाव दिनुक..
अब फेसबुकबाट पैसा पठाउन सकिने, यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ यो सेवा
के तपाईं आफ्नो सोसल मिडिया वेबसाइट फेसबुक, स्न्यापच्याट र ह्वाट्सएपलाई यति विश्वास गर्नुहुन्छ कि आफ्नो पैसा ती वेबसाइटको भरोसामा छोड्नुहुन्छ ? तपाईं सायद गर्नुहुन्न होला तर अमेरिकाका धेरैजसो मानिसहरु यसो गर्छन् । कम्तिमा पनि १८ वर्ष पुगेका मानिसले अब फेसुबकमार्फत पैसा पठाउन सक्छन् । यहाँ तपाईंले आफ्नो डेबिट कार्ड रजिस्टर गर्नुपर..
खगोल खोजका लागि २१ विद्यार्थी छनोट
काठमाडौँ – नेपाल एस्ट्रोनोमिक सोसाइटीले ‘तेस्रो राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाड, २०१६’ का लागि मुलुकभरबाट २१ विद्यार्थी छनोट गरेको छ । सोसाइटीले छनोटमा परेका विद्यार्थीलाई बन्द शिविरमा राखेर खगोल खोज तथा अनुसन्धानमा लगाउने जनाएको छ । गत जेठ २९ गते सञ्चालन गरेको तेस्रो राष्ट्रिय एस्ट्रोनोमी ओलिम्पियाड–२०१६ मा मुलुकभरबाट सह..
काठमाडौ – हिमालय उच्च माध्यामिक विद्यालय पर्वत खुर्कोट बगैंचा कक्षा– ९ मा अध्ययरत अमन पौडेलले विज्ञान विषयमा पढेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण बनाएका छन् । अमनले कक्षामा पढेका कुरालाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि परिणत गर्नका लागि पेट्रोल, डिजलको सट्टा अमनले पानी र ब्याट्रिबाट चल्ने आधादर्जन विज्ञान ..
पत्याउनु हुन्छ ? साङ्लाको दुधले तपाईंको शरिरलाई बनाउनेछ शक्तिशाली !
लण्डन । घरभित्र साङ्ला निकै सजिलै पाइन्छन् । यो शरिरका लागि हानिकारक मानिने भएकाले यसलाई हटाउन विभिन्न तरिका अपनाइन्छ तर अपनाइएका सबै उपाय सफल हुँदैनन् । हामी जुन किरालाई आफ्नो घरबाट हटाउन निकै प्रयास गर्छौं त्यही जीव हाम्रो शरिरको लागि निकै फाइदाजनक छ भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला । वैज्ञानिकका अनुसार साङ्लाको दुध ऊर्जाले भरिपूर..
जियोनीले लञ्च गर्यो ३३ दिनसम्म ब्याट्रि ब्याकअप दिने स्मार्टफोन
चीनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले दुई स्मार्टफोन एम सिक्स र एम सिक्स प्लस लञ्च गरेको छ । यो दुबै स्मार्टफोनको चिपमा डेटा एन्क्रिप्शन लगाइएको छ जसका कारण यसका प्रयोगकर्ताले अरु स्मार्टफोनभन्दा बढी सेक्युरिटी र प्राइभेसी पाउनेछन् । यी स्मार्टफोन श्याम्पेन गोल्ड र मोचा गोल्ड कलरमा उपलब्ध गरिएको छ । शक्तिशाली ब्याट्री सबैभ..
एप्पलको आइफोन सेभेन लञ्च हुन कम्तीमा पनि दुई महिना बाँकी छ । रिपोर्टलाई मान्ने हो भने यो वर्ष कम्पनीले ह्यान्डसेटको डिजाइनमा खासै परिवर्तन नगरि आइफोन सिक्स एस प्लसको अपग्रेटेड भर्सनलाई आइफोन सेभेनको नाम दिएर लञ्च गर्ने भएको छ । आइफोन सेभेनको विशेषता र फोटो लिक भएपछि यो कुरामा केही हदसम्म सत्यता रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ […]
गुगलमा कहिले पनि सर्च नगर्नुहोस् यी कुरा, मश्किलमा पर्नुहोला
यदि तपाईं गुगलमा केही कुराहरु सर्च गर्नुहुन्छ भने यो खबर तपाईंको लागि विशेष छ । गुगलमा यस्ता कुराहरु पनि छन् जसलाई सर्च गर्दा तपाईं मुश्किलमा पर्न सक्नुहुन्छ । यस्तोमा गुगल सर्च गर्नुभन्दा पहिले तपाईंले कस्तो कुरा सर्च गर्नबाट बच्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन निकै आवश्यक छ । गुगलमा बिर्सेर पनि संदिग्ध कुराहरुको सर्च नगर्नुहोस् । [..
बृहस्पति ग्रहको कक्षमा मानवनिर्मित भूउपग्रह
क्यालिफोर्निया — अमेरिकी स्पेस एजेन्सी नासाले बृहस्पति ग्रहको कक्षमा सफलतापूर्वक भूउपग्रह पठाएको छ । पाँच वर्षअघि पृथ्वीबाट बृहस्पति ग्रहका लागि पठाइएको उक्त भूउपग्रह आज आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको हो । जुनो नाम गरेको भूउपग्रहले सफलतापूर्वक कक्षमा रहेर रेडियो सन्देश पठाएपछि क्लालिफोर्निया नासाको मिसन कन्ट्रोल रुममा खुसियाली छाएको थियो..
गल्ती गर्दा दिमागमा के खेल्छ ?
काठमाडौं–गल्ती गरेर पनि मानिसले धेरै कुरा सिक्छ । यो कुरा अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । अमेरिकाको मिसिगिङ युनिवर्सिटिका प्रोफेसर जैसन मोरले दिमागको संचालन गर्ने न्यूरल मेकानिजमको अध्ययन पुरा गरेका छन् । जव मानिस गल्ती गर्छ, तव उसको दिमागमा दुई प्रतिक्रियाको सम्भावना हुन्छ । पहिलो प्रतिक्रिया दिमागमा इलोक्ट्रिक गतिविधि बढ्छ । यस्..
अब आयो फोल्डिङ वाइक
बेइजिङ–मोवाइल फोन बनाउने कम्पनी शाओमीले अव अटोमोवाइल क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ । यो कम्पनीले वाइक बनाउने योजना तयार गरेको छ । कम्पनीले हालै मात्र इलोक्ट्रिक वाइक लंच गरेको छ । कम्पनीले यसलाई एमआई क्रिसाइकल नामबाट पेश गरेको छ । यसको मुल्य २९९ युयान छ । एमआइ क्रिसाइकल एक इलोल्ट्रिक फोल्डिङ वाइक हो । यसमा […]
काठमाडौँ – प्राकृतिक प्रकोप चट्याङले पु¥याउने धनजनको क्षति न्यूनीकरण तथा त्यसबाट बच्ने उपायबारे छलफल गर्ने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र मलेसियाका ४० वैज्ञानिक सहभागी रहेका छन् । सम्मेलनमा १३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने छ । चट्याङ र..
बङ्गालको खाडीमा मौसम बुझ्न पानी भित्रै रोबोट
नयाँ दिल्ली – बङ्गालको खाडीमा मौसमको अवस्था बुझ्ने प्रयोजनका लागि पानी भित्रै रोबोट परिचालन गरेर बुझिने भएको छ । भारत र बेलायतका मौसमविद्हरुले सो रोबोट पानीमा परिचालन गर्ने भएका हुन् । भारतीय समुद्रको पानीभित्रबाट बङ्गालको खाडीको मौसम मापन गरिने भएको बताइएको छ । मौसमको भविश्यबाणी प्रक्रिया थप विश्वसनीय बनाउन र यकिन रुपमा म..
‘ह्याक-अ-विक’ असार ७ गतेबाट सुरु हुने
पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पस कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रोनिक्स सङ्काय चौथो वर्षका विद्यार्थीको आयोजनामा ह्याकाथन संचालन हुने भएको छ।
भाइरसको खतरामा नेपाली कम्युटर : एसियामा चौंथो स्थानमा
काठमाडौं – नेपालका कम्युटरहरु भारइसको खतरामा रहेको माइक्रोसफ्ट एसियाले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । मालवेयर इन्फेक्सन इन्डेक्स २०१६ का अनुसार नेपाल भाइरसको खतराको दृष्टिले एसियामा चौंथो स्थानमा रहेको छ । पहिलो स्थानमा पाकिस्तान पहिलो स्थानमा रहेको छ भने इन्डोनेसिया, बंगलादेश क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । यी देशहरुमा औ..
यो हो १६ लाखको विश्वकै सुरक्षित स्मार्टफोन
तपाईंलाई आफ्नो गोपनीयता कति प्यारो लाग्छ ? यदी तपाईंको उत्तर ‘धेरै’ हो र खर्च गर्नलाई तपाईंसँग टन्नै पैसा पनि छ भने बजारमा एउटा यस्तो फोन आएको छ, जसलाई विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित फोन भनेर दाबी गरिएको छ । तर, यो सस्तो भने छैन । यसको मूल्य १६ हजार ५०० डलर (झण्डै साढे १६ लाख नेपाली रुपैयाँ) […]
काठमाडौँ – यही जेठ ५ गतेदेखि सूर्यमा लाग्दै आएको दाग अझै केही दिन रहने बताइएको छ । सूर्यमा देखिएको दाग हेर्दा सानो देखिए पनि पृथ्वीको आकारभन्दा धेरै ठूलो रहेको छ । सूर्यमा हुने गतिविधिले तापक्रममा घटबढ हुँदा यस्ता दाग देखिने गरेको नेपाल खगोलीय समाजका अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले बताए। सामान्यतः सूर्यको तापक्रम छ हजार डिग्री सेन..